के स्वर्गदूतहरूले हामीलाई मदत गर्न सक्छन्‌? के खराब स्वर्गदूतहरू पनि छन्‌?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
के स्वर्गदूतहरूले हामीलाई मदत गर्न सक्छन्‌?
विगतमा स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरका वफादार सेवक दानियललाई मदत गरेका थिए। त्यसैगरि आज पनि तिनीहरू मानिसहरूलाई बाइबलको सुसमाचारबाट लाभ उठाउन मदत गर्छन्‌
मानिसहरू बनाउनु भन्दा धेरै समय अघि यहोवा परमेश्वरले करोडौं स्वर्गदूत सृष्टि गर्नु भएको थियो। (अय्यूब ३८:४, ७) स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको सेवा गर्ने शक्तिशाली अदृश्य प्राणीहरू हुन्‌। पृथ्वीमा भएका आफ्ना सेवकहरूलाई डोऱ्याउन र रक्षा गर्न यहोवा परमेश्वर कहिलेकाहीं स्वर्गदूतहरूलाई चलाउनु हुन्छ। (भजन ९१:१०, ११) आज ख्रीष्टियनहरूले प्रचार गरिरहेको सुसमाचारबाट लाभ उठाउन सकून्‌ भनेर स्वर्गदूतहरू मानिसहरूलाई मदत गर्दैछन्‌।—प्रकाश १४:६, ७ पढ्नुहोस्।
के हामीले मदतको लागि स्वर्गदूतहरूलाई प्रार्थना गर्न मिल्छ? अहँ, मिल्दैन। प्रार्थना गर्नु भनेको उपासनाको एउटा भाग हो। हामीले परमेश्वरको मात्रै उपासना गर्नुपर्छ। (प्रकाश १९:१०) स्वर्गदूतहरू परमेश्वरका सेवकहरू भएकाले तिनीहरू मानिसको होइन, परमेश्वरको निर्देशनहरू पालन गर्छन्‌। त्यसैले हामीले येशू मार्फत परमेश्वरलाई मात्र प्रार्थना गर्नुपर्छ।—भजन १०३:२०, २१; मत्ती २६:५३ पढ्नुहोस्।
दुष्ट स्वर्गदूतहरू पनि छन्‌?
मानिसहरूलाई जस्तै स्वर्गदूतहरूलाई पनि छनौट गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ। मतलब, तिनीहरू सही र गलत छुट्टयाएर आफै निर्णय गर्न सक्छन्‌। तर दुःखको कुरा थुप्रै स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरविरुद्ध विद्रोह गरे। (२ पत्रुस २:४) यस्तो विद्रोह गर्ने सबैभन्दा पहिलो स्वर्गदूत सैतान थियो। पछि अरू स्वर्गदूतहरूले पनि सैतानलाई साथ दिए र दुष्ट स्वर्गदूतहरू बने। केही समयअघि सैतान र त्यसका दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई स्वर्गबाट निकालियो अनि पृथ्वीमा फालियो।—प्रकाश १२:७-९ पढ्नुहोस्।
सन्‌ १९१४ यता दुष्टता र हिंसा दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढ्दै छ। यसले के देखाउँछ भने परमेश्वरले चाँडै नै सैतान र त्यसका दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई नाश गर्नु हुनेछ। त्यसपछि उहाँले पृथ्वी सृजनुहुँदा सुरुमा राख्नुभएको उद्देश्य अनुरूपै पृथ्वीलाई एउटा सुन्दर बगैंचा बनाउनुहुनेछ।—प्रकाश १२:१२; २१:३, ४ पढ्नुहोस्।
स्वर्गदूतहरूले हामीलाई कसरी मदत गर्न सक्छन्‌